राजनीतिक दलका घोषणापत्र : हाम्रो सबैभन्दा राम्रो, अर्काको सबैभन्दा ‘झुर’ – Himalaya Times ।। One of the leading Newspaper in Nepal is Himalaya times. The online portal of ehimalayatimes.com
प्रदेशसभामा आजदेखि मन्त्रालयगत बजेटमाथि दफावार छलफल
राजनीतिक दलका घोषणापत्र : हाम्रो सबैभन्दा राम्रो, अर्काको सबैभन्दा ‘झुर’
१९ बैशाख २०७९, सोमबार ०५:५२
Read Time = 12 mins
काठमाडौं । आसन्न स्थानीय तह चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन् । मुख्य राजनीतिक दलहरूले संकल्प पत्र, प्रतिबद्धता पत्र जस्ता नाम दिएर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र मतदाता तान्न मात्र केन्द्रित देखिएका छन् । गएको पाँच वर्षअघिको प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको दलहरूले यसपटक पनि विभिन्न योजना राखेर सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा विगतमा जस्तै जनता झुक्याउने र भोट तान्ने किसिमका आश्वासनलाई भने निरन्तरता दिएका छन् । घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको प्रायः दलहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
आसन्न स्थानीय तहको चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूले जारी गरेका घोषणापत्रमा भाषा र प्रस्तुति फरक भए पनि सबैजसो दलहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सामाजिक सुरक्षा सुशासन र विकास निर्माण जस्ता विषय प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, सारतत्व एउटै भए पनि दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रलाई उत्कृष्ट र अरू दलको घोषणापत्रलाई निकम्मा आशय व्यक्त गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको घोषणापत्रलाई उडन्ते योजनाको पुलिन्दा/झुटको पुलिन्दा भनेको छ भने नेकपा एमालेले कांग्रेसको घोषणापत्रलाई लद्दु विद्यार्थीले परीक्षामा चिट चोरे जस्तै भएको टिप्पणी गरेको छ । अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो घोषणापत्र यथार्थपरक बाचा भएको भन्दै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । घोषणापत्र जारी गरेका सबैजसो दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रलाई राम्रो र अरू दलका घोषणापत्रलाई नराम्रो देखाउने प्रयत्न गरेका छन् ।
तुलनात्मक रूपमा यथार्थपरक घोषणापत्र
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा रेलमार्ग, पानीजहाजलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर, पाँच वर्षपछि हुन थालेको आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्रमा भने दलहरू केही यथार्थ धरातल टेकेको आभास मिल्छ । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रहरूमा फराकिला सडक, ठूला जलविधुत्त आयोजना सहितका महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाको सट्टा दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा शिक्षा, कृषि, खानेपानी तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन र स्थानीय पूर्वाधारलाई प्राथमिकता राखेका छन् । यो चुनावमा अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा राजनीतिक दलहरूले तुलनात्मक रूपले यथार्थपरक बाचा गरेका छन् ।
अघिल्लोपटक स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रको आवरणमै सबैभन्दा माथि रेल, त्यसभन्दा तल सुरुङ मार्ग र फ्लाइओभर सडकसहितका महत्वाकांक्षी नक्सा राखेको थियो । यसपटक भने आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको लागि कांग्रेसले घोषणापत्रको आवरणबाट रेल पूर्वाधारको नक्सा हटाएर विद्यालय र अस्पताल लगायतका जनताका आधारभूत आवश्यकताका संरचनाको नक्सा राखिएको छ । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा ४० प्रतिशत मत पाएको नेकपा एमालेले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा रेल यातायातका पूर्वाधार निर्माण र पानीजहाज लगायतका उडन्ते योजनालाई प्राथमिकता दिएको थियो । अघिल्लो चुनावअघि राजधानी काठमाडौंमा भित्री चक्रपथको समानान्तर ट्राम र अत्याधुनिक मेट्रो रेल निर्माण गर्ने वाचा एमालेको घोषणापत्रमा थियो । तर, योपटक स्थानीय तह निर्वाचनको लागि जारी गरेको घोषणापत्रमा एमालेले ठूला शहरहरूमा रेल, बस ¥यापिड ट्रान्जिटलगायत यातायात प्रणालीको विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँगाउँमा सिंहदरबार र घरघरमा रोजगारसहित रेल पूर्वाधार, मोनो रेल, मेट्रो रेललगायत पूर्वाधार बनाउने बाचा गरे पनि योपटक भने माओवादी केन्द्रले घोषणापत्र नै बनाएन । पहिलोपटक स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि रेल पूर्वाधारभन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनका पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अघिल्लो निर्वाचन यता एकीकरण र विभाजनपछि बनेको जनता समाजवादी पार्टीले महानगरहरूमा नगर रेलको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । रेलसहित यातायात, विद्युत् र पर्यटनको विस्तारमा जोड दिने घोषणापत्र लिएर गएको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भएको राप्रपाले यो पटकको चुनावी प्रतिबद्धतामा सुशासनसहित शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
लिखित दस्तावेजमै एक-अर्काप्रति गालीगलौज
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा विपक्षी दलको कटु आलोचना गरेका छन् । आफ्ना योजनाबोहक अन्य पार्टीको तीखो आलोचना र गाली घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । गालीको राजनीतिबाट प्रमुख दलहरू घोषणापत्रमा समेत अलग रहन सकेका छैनन् । पार्टीहरूबीचको तीखो घोचपेच घोषणापत्रहरूमा छरपष्ट देखिन्छ । एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला र गठबन्धन सरकारलाई तारो बनाएको छ । नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन नेकपा सरकार र एमालेलाई । कांग्रेसले पनि आफ्नो घोषणापत्रको सुरुबाटै तत्कालीन नेकपा सरकारको गतिविधिलाई तीव्र रूपमा आलोचना गरेको छ । कांग्रेसले एमालेलाई सर्वोच्च अदालतले बनाएको पार्टीको संज्ञा दिएको छ । एमालेबाट विभाजन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि एमालेकै आलोचनामा घोषणापत्रका केही पाना खर्च गरेको छ । एमालेबाट छुट्टिएर असल कम्युनिष्ट बन्ने प्रयत्न गरेको एकीकृत समाजवादीको दाबी छ । ओली सरकारबाट जनताले गरेका अपेक्षामाथि कुठाराघात भएपछि ओलीको दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्ध समयमै विद्रोह गरी कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जोगाउने प्रयास गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यसरी सार्वजनिक कार्यक्रममा मात्र होइन, लिखित दस्तावेजका रूपमा रहने घोषणापत्रमा पनि दलहरूले एक–अर्कालाई गाली गरेका छन् । घोषणापत्रमा राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना विपक्षीलाई खुइल्याउन हदैसम्मको प्रयत्न गरेका छन् ।
घोषणापत्रलाई लिएर एमाले-कांग्रेसबीच आरोप प्रत्यारोप
आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको लागि जारी घोषणापत्रलाई लिएर सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबीच नोकझोक नै चल्यो । स्थानीय तह निर्वाचनको लागि नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘पागलहरूको प्रलाप’को संज्ञा दिनुभयो । कांग्रेसको घोषणापत्र राजनीतिक नै नभएको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘कांग्रेसको घोषणापत्र कुनै राजनीतिक दस्तावेज होइन । त्यसलाई राजनीतिक दस्तावेजको दर्जा दिन सकिँदैन । पागलहरूको प्रलाप हो त्यो । घोषणापत्रमा मुख छाड्ने, गाली गर्ने, तथानाम बोल्नेबाहेक केही पनि छैन । कसरी राजनीतिक दस्तावेज हुन्छ ? केही नै छैन । जम्माजम्मी धारेहात लगाएको छ । एमाले, एमाले, पाँच वर्ष खेर गयो आदि इत्यादि ।’
घोषणापत्रप्रति अध्यक्ष ओलीले गरेको टिप्पणीले नेपाली कांग्रेसका नेताहरू प्रतिवादमा उत्रिए । नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक एवं कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई शरीरको ख्याल राखेर अभिव्यक्ति दिन सुझाव दिनुभयो । कांग्रेसको घोषणापत्रप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेको टिप्पणीको जवाफ दिन पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएका महामन्त्री थापाको टिप्पणी छ, ‘सनक्क सन्किँदा शरीरलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । शरीरको ख्याल राख्नुहोला । जसको मुखमा अँगार छ उसले ओकल्ने कालै हो । झुटलाई कसैले च्यालेञ्ज गर्छ उहाँले सबैभन्दा पहिले गाली गर्ने कुरा पागल हो । सुशीला कार्की, गोविन्द केसीलाई पनि भन्नुभएकै हो ।’
महामन्त्री थापाले चुनावबाट फुर्सदिलो भएपछि बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई ट्युसन पढाउने बताउनुभयो । ओलीको टिप्पणीप्रति लक्षित गर्दै कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले त ओलीले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
एमालेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई संसदमा बोल्न
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबारे संसदीय छानविन समिति
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक वर्षमा ३६
अमेरिकामा अत्याधिक गर्मी बढेपछि
शिखरको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
जनवादी गायक शर्मा बागलुङमा
स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय